Accueil > Gazetin'ny nosy > Magrama: Nopotehin’ny fanjakana tanteraka
Magrama: Nopotehin’ny fanjakana tanteraka
Tamin’ny alakamisy faha 14 desambra 2017 lasa teo no natao lavanty ny fananan’ny orinasa Magrama (Marbre et granite de Madagascar) izay ao Ambatofinandrahana. Ity no lavanty faharoa natao tamin’ity orinasam-panjakana ity tao anatin’ny roa taona izao. Ny iray voalohany dia fiarakodia IVECO lehibe sy kojakoja amin’ny fiara vaventy ary fitaovana fitrandrahana vato maro no nalefa tamin’izany. Tamin’izao andiany faharoa izao dia miisa 13 ny entana lehibe izay natao lavanty tao amin’ity orinasa lehibe ity. “Groupe élèctrogène” lehibe efatra izay manana tanjaka 750 kva ny telo tamin’izany, ary 100 kva ny iray kely indrindra. Niampy ireo ny « tableau G1+G2+G3, tableau gestion groupe, tableau G4, tableau de puissance, tableau d’urgence, clarc, tableau bâtiment des groupes élèctrogenes, armores en bois, et bouteille d’air ».
Izao fanaovana lavanty izao dia notaterahan’i Commissaire Priseur, Maître Andrianaivomanana Ramahatàna Rampanjato avy ao Ambositra araka ny didim-pitsarana fanatanterahana ny didy hitsivolana mitondra ny laharana 1164-NE/2017 , izay nomena tamin’ny 8 novambra 2017 avy tamin’ny filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambositra. Ny fitsarana natao tamin’izany dia natao tao Ambositra ary tamin’ny 17 martsa 2016 izay natao tao amin’ny fitsarana momban’ny asa tao Toliara. Misy olona maromaro mitory ny orinasa Magrama amin’izany.
Potika tanteraka noho izany ny orinasa Malagasy antsoina hoe Magrama. Nitazam-potsiny ny fanjakana Malagasy izay tompon’ny vola betsaka indrindra miasa amin’ity orinasa ity. Tsy afaka niaro ny harenany ny firenena intsony ny fanjakana tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Aiza ingahy YING Vah Zafilahy minisitrin’ny angovo amin’izao fotoana izao satria mahalala tsara ity orinasa ity izy satria efa tale teknika tao amin’ity Magrama ity teo aloha?
Orinasa nandeha tsara ny Magrama tao Ambatofinandrahana tao alohan’ny taona 2010. Vokatrin’ny raharaham-pirenena teto Madagasikara dia voatery nanao fiantoana ara-teknika ity orinasa ity. Tamin’izay fotoana izay koa no efa voalaza fa nisy ny ampimamba nataon’ingahy Ravalomanana Marc tamin’ity orinasa ity. Ny taona 1972 no niforoanan’ny orinasa ka niova in-telo ny anarany hatramin’izay. SEVMACAM, dia nivadika Technoston, ary lasa Magrama ny taona 90 tany hoany.
Ity no orinasa farany nisy tao amin’ny faritanin’ny Fianarantsoa, izay azo lazaina fa lehibe indrindra. Nopotehin’ny fanjakana izany ankehitriny amin’izao andron’ingahy Hery Rajaonarimampianina izao. Tsy afaka mihodina intsony ity orinasa ity; Potika tanteraka satria ny milina hanome ny herinaratra no natao lavanty noho ny tsy firaharahan’ny fanjakana azy. Azon’ny fanjakana natao tsara nefa ny nisoroka izany toa ny nanarenan’ny filoha Didier Ratsiraka azy ny taona 1997. Milaza ny mponina any Ambatofinandrahana fa misy tetika polika lalina ao anatin’izao raharaha izao. Tsy Ambatofinandrahana irery ihany nefa no voa mafy amin’izany fa ny firenena manontolo.